Isibikezelo seenkwenkwezi ngo-2011 kuphela
NgoFebruwari 3, ngokwekhalenda yeTshayina, unyaka we-White Cat (iRbbit, Hare) iya kuza. Sinikela kuwe ingxelo yeenkwenkwezi kuphela ngo-2011. Yonke into enomdla ulapha.
Icandelo lamandla lonyaka liya kudibaniselwano, ukungenisa izihambi, ukudala induduzo yasekhaya. Umlawuli wonyaka, i-Venus iplanethi ithembisa impumelelo kubantu abakhalayo, ukuzama ukuXhobela uxolo kunye nokuBambisana, abakwazi ukunika uthando. Ngelo xesha, lo ngumnyaka weenguqu ezinzulu kwiingcamango, ishishini, ezopolitiko, apho bonke abantu baya kubandakanywa khona. Ukungena kweJupiter kwisibonakaliso se-Aries kuza kunika intando, amandla kunye namandla ukuphumeza izicwangciso ezintsha, iiprojekthi, ukuhlaziywa kobudlelwane boluntu noluntu. Ukungena u-Uranus kwisibonakaliso se-Aries, apho uya kuhlala khona iminyaka eyisibhozo, uya kuncedisa ekuphumeleleni kwezobuchwepheshe, izixhobo ezintsha ezinceda ukutshintsha umyalelo wehlabathi.
Phakathi kwentwasahlobo, uNeptune uya kutshintsha isikhundla sakhe, esiya kudlula kumqondiso we-Aquarius ukuya kwisibonakaliso sePisces kwaye siya kuhlala kuloo mqondiso iminyaka eyi-15, enempembelelo enkulu ekuphuhliseni ubugcisa, umculo, ubugcisa, ukudweba kunye nobudlelwane bomntu. Indima ebalulekileyo kuluntu iya kudlalwa yinkolo. Abameli beenkolelo ezahlukeneyo baya kusebenza kwi-vanguard yeenkqubo zezopolitiko, benza umsebenzi wokugcina uxolo. Amandla amakhulu okunika ubomi aya kuba nemilingo yomlomo, imithandazo yokufunda. Kukulungile kulonyaka ukuhambisa intetho, ukukhusela amalungelo akho enkundleni, wenze izifiso ezilungileyo.
Ngo-2011 kuya kubanjwa phantsi komqondiso we-6 eclipses - ilanga kunye neenyanga, ezinokuchaphazela kakubi isimo sezempilo kunye namanyathelo omashishini. Unokujamelana nemidlalo emva kwemidlalo, ubuqhetseba, izivumbuzo. Izivumelwano zokuphelisa kunye namaxwebhu okutyikitya enenkathalo enkulu. Ngokuqhelekileyo, lo ngumnyaka wokwakhiwa kabusha, ukwakhiwa isiseko sezinto eziza kwenziwa ngexesha elizayo, ukutshintsha yonke into eye yaphelelwa yinto entsha, ifumaneka.
Kwaye ngoku siphendukela kwindalo yeenkwenkwezi kuphela ngo-2011 kubameli beempawu ezahlukileyo, ngokweminyaka yokuzalwa.
I-MOUSE - Ubomi buza kuseka iingxaki zemihla ngemihla. Ukufezekisa impumelelo, kucetyiswa ukuba usebenze ngokuqaphela, ngeendlela ezifihlekileyo ezifihlakeleyo, emva kweemboniso, ukuphepha ukuxabana kweentsapho. Baya kuzisa ingxaki ekuxazululeni imiba yezindlu, ukutshintshisana, ukulungiswa, ukufuduka. Ukunyamezela nomsebenzi kuya kunceda ekupheleni konyaka ukwenzela ukwandisa uhlahlo lwabiwo-mali lwentsapho, ukuphucula umgangatho wobomi kunye namava yovuyo. Isitshixo sokuphumelela kwiphina ishishini lilungelelanisa imeko.
BULL - Kubalulekile ukucinga kwakhona ngezikhundla zobomi, ukuququzelela intando yokuhlaziya izimo zobomi. Into ephambili ayiyikuguqula ubomi ibe yintetho engenanto, ingxabano engenakuncedo, ukuphula izibophelelo ezinobungozi, ukuqinisa oomnxibelelwano onobungane kunye nabancedo. Qaphela ukukhuthazwa kwezempilo. Amaqhinga okudibanisa kunye nokunyaniseka kuya kunceda ukugcina ukufudumala nokuthuthuzela ekhaya. I-autumn yithuba elihle lomanyano womtshato.
I-TIGER - Ubomi buza kusetha imisebenzi emininzi, kuya kufuna ubuchule bezoshishino, ubuchule. Musa ukuhlala, wenze izicwangciso, khangela iindlela ezikhokelela ekuphumeleleni. Kodwa cinga phambili, qaphela ngeendleko zemali - kukho ingozi 'yokubeka imali emoyeni' kwaye uhlala neepokotshi ezingenanto. Kwiimeko, zithembele kwenkxaso yabalingane - kuphela ukuba ungadluli.
I-COT - Unyaka awuthembisi ubomi obulula, kuya kufuna ukuququzelela intando, amandla ukunqoba ubunzima nokukhusela amalungelo awo. Kwiimeko uya kuphembela kuphela ngamandla akho kunye nekhono lakho. Lo ngumnyaka wokuvavanya ubuntu ngamandla kunye nokuvavanya. Imali ingaba "yindawo yokuqhuba imisebenzi yempi." Kodwa ithemba - amandla akho! Umnqweno wokuthandana luya kubangela utshintsho kwimeko - ukuhamba, ukuhamba phesheya.
I-DRAGON - Unyaka awuyi kukuvumela ukuba uphumule, uvivinywe, usebenze inzondo yabangcibi bemfihlo. Ukuba nomona - musa ukwenza. Yiba nezimo ezintle, zama ukuxhamla kwiimeko ezimbi, ungesabi ukubeka ingozi. Utshintsho lwemali lunokwenzeka. Ukuhlala ngokukhawuleza kuya kunceda, ukubala okungenangqondo, isilathiso esicacileyo senzoko kunye nempilo enempilo, kunye nokunqoba iimpazamo zakho ezifihliweyo.
SNAKE - Ngo-2011, kungcono ukuba ungakheli izicwangciso ezinkulu, ungagqithisi izinto uze ukhethile xa ukhetha abahlobo - "okhokelwa kuyo, ukusuka kulo kwaye uya kufakelwa!" Yenza ukubheja kwixabiso lentsapho. Ngenxa yokulondoloza uxolo, bonisa ukudibanisa, wenze ulungelelaniso. Abo bangenabunono kakhulu "ukubetha umunwe ngomunwe" baya kufumana inzuzo yezemali. Umtshato unokwenzeka ngenxa yesithando somoya okanye umtshato wesibini.
I-HORSE - Unyaka uya kufuna ukuba isigulane sisebenze ngokusemthethweni. Ndiza kufuneka ndibonise ukuthobeka, ndibeke "kuyimfuneko" ngaphezu "Ndifuna". Kukho ubunzima ekusebenzisaneni nabasemagunyeni. Yiba lula, uguquke ngakumbi, ubekezele, uphephe ukungquzulana. Ingozi iyingozi - ityala ligqiba yonke into! Gcina ukufudumala nokuphefumula kobudlelwane obuhle. Qaphela ukomeleza impilo yakho kunye nenduduzo yasekhaya.
I-KOZA - Kwinqanaba lokuqala lonyaka, ukunyamezela kufuneka kuboniswe, kunye nokunyamekela ekusebenzeni imisebenzi yabo. Imisebenzi ayiyi kuchitha, izicwangciso ezicwangcisiweyo ziya kuqala ukuphunyezwa, igunya lokukhula! Impumelelo iya kufezwa ngeendleko zemizamo yakhe, kungekhona ingozi. Kwisiqingatha sesibini sonyaka, unokuvuna ngokukhuselekileyo inzuzo yenhlanhla, uzive unomdla wokunqoba. Kodwa ukuze ugweme ukuphoxeka - ungacwangcisi lo nyaka uhambo olude, uhambo lwangaphandle.
I-MONKEY - Isibikezelo seenkwenkwezi ngo-2011 sithi: ulindele ezininzi izinto ezixakekayo. Lindela nantoni na. Imali iyakudlula ngeminwe yakho. Qaphela ukugcinwa kwemali, ukulawula kwengqondo nokuziphatha. Ukuzichukumisa ukucinga, ukunyaniseka kwendlela yokuziphatha, ukomeleza ukunxibelelana nabathandekayo kunye nabantu abemi bomthonyama. Ukuhlawula ingqwalasela ephambili ekuphuculeni ubomi bendlu, izimo zezindlu, ujoyine inkolo. Uqhagamshelwano lwezoshishino ngamazwe angaphandle luzisa inzuzo. Uhambo lwangaphandle luya kuphumelela.
UCOCK - Unyaka, awuthembisi ubomi obulula. Iingxaki zezoshishino zingabangela ubumfihlo kwindawo yesibini. Musa ukukhuphela ulwaphulo, umtshato kunye ... "igama lomfana." Ubomi bubiza ukuhlaziywa. Ungahlali, uxoxe ngakumbi, uqhelane, ufunde izakhono ezisebenzayo, uthathe ingozi, utshintshe. Inkxaso iya kunikwa izihlobo kunye nabahlobo.
I-DOG - Kwinqanaba lokuqala lomnyaka kuya kufuneka lisebenze nzima, lithobele imeko, lunyamekele impilo. Imizamo ayiyi kuchitha. Ukunyaniseka kunye neendlela zokudibanisa kunye nokunciphisa iza kunceda ukuqinisa isithuba esisemthethweni, ukuqinisekisa ukunyuka kwezimali. Abantu abashishino kunye nabangenayo ekupheleni konyaka bathembisa ukuphunyezwa kwezicwangciso zonke. Ukuzama ngokuzimisela injongo kuya kunqoba yonke into. Into ephambili ayiyikuyeka kwaye ingalahli.
I-KABAN - Ngokutsho kwenkcazelo yeenkwenkwezi, uza kuba nomnyaka wohluke, ukuphakama nokuhla. Impumelelo yonyaka ihambelana ngqo nemizamo eyenziwe, kunye nokufaneleka kunye nodumo. Siya kufuneka sibonise umonde, ukuthobeka, senze umsebenzi ngaphezu kwayo yonke, sinyamekele ngemisebenzi yethu, sizithathele ngokuzithandela nayiphi na imisebenzi, sichaze ubugcisa, sikhonze kwaye siyithobele. Uya kuzuza inzondelelo yeenkqubo zezempilo, ukuqaliswa kwenkolo.
Ivelisa ubutyebi kunye nenhlanhla
I-horoscope yaseTshayina ngonyaka wokuzalwa
Iimpawu ekuzalweni: into enokuyenza kwaye ayikwazi ukuyenza xa ibhinqa lizala
Iinkolelo, iinkolelo, iimpawu, imvelaphi kunye nenjongo
Amaqanda agqitywe nge "Glade yaseMushroom"
Indlela yokwahlula otshatileyo: iingcebiso zengqondo yengqondo
Ukunyamekela kweenwele ngexesha lokukhulelwa
Indlela yokukhetha ixesha elifanelekileyo lokuphumla
Ukusetyenziswa kweoli efunekayo yomthi weeyi
Ukukhethwa kohlobo lweziko lemfundo
Ikhalenda lezeMpilo: Agasti, Septemba, Oktobha, Novemba, Disemba
Izinwele eziglasi: ukuphelisa izizathu
Indlela yokunyamekela ulusu lolutsha ukuya kunyaka
IHoroscope ye-Aquarius yabasetyhini ngoJanuwari 2017
Ukuchazwa kwephupha apho uhamba khona ngesitimela
Isaladi efudumele kunye nesipinashi kunye neerinki
Indlela yokunqoba ubuvila kwaye ungene kwimidlalo rhoqo
Mantas nge sibini
Jonga i-EURO 2016 ukusuka kwi-NIKI - kubalandeli kunye namadoda okwenene
I-pie ne capelin puff